နည်းပညာများစုစည်းမှု ( ၃၀၀ ) ဝန်းကျင်ခန့်ပါခဗျာ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
နည်းပညာများစုစည်းမှု ( ၃၀၀ ) ဝန်းကျင်ခန့်ပါခဗျာ Author: lu bo | 10:46 PM | No မှတ်ချက် | စာအုပ်လင့်ပေါင်းစုံ· ပထမတင်ထားတဲ့ပိုစ့်က ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ဝင်မရတော့လို့ ထပ်တင်ပေးတာပါခဗျ ကိုယ်ပိုင်လင့်မဟုတ်သော အခြားလင့်များကို ချန်ပြီးတင်မှ တင်လို့ရပါတော့တယ်ခဗျ။
၁။ဆန္ဒီလွင် The Myanmar Android မြန်မာလိုစာအုပ် http://pc.cd/g7MctalK
၃။Joomlaအခြေခံ-မိုးမြင့်ရှိန် ( 1.50 MB ) စာမျက်နှာ - ၄၂ http://pc.cd/TaErtalK
၅။The Myanmar's Android http://pc.cd/36gctalK
၆။ထားထားစောလွင် APP ရေးသားနည်း
http://pc.cd/jpDctalK ၇။စုကြည်ထွေး ဖေ့ဘုတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ http://pc.cd/8OgctalK
၉။ဦးအောင်မြင့် Excel 2010
၁၀။ဦးအောင်လင်း Learning Excel 2007
၁၅။ကောင်းမြတ်ဦး တင်ထွဋ် အခမဲ့ Website ရေးတင်နည်း http://pc.cd/SEgctalK
၁၆။ကိုနေ Basic Networking
Windows 8 ကိုလေ့လာခြင်း ( 43 . 22 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၇၂ http://pc.cd/jvArtalK
၁၈။နေဇော်ဝင်းမောင် Learning Guide for 3D Sudio Max ( ပတွဲ )
၁၉။Turbo C Programming အခြေခံ မြန်မာစာအုပ် http://pc.cd/l7PctalK
၂၀။ဝင်းဟိန်း ANDROID Application ရေးသားခြင်း http://pc.cd/fXPctalK
၂၁။ကိုမြန်မာ Microsoft Access 2010 ဖြင့် database Program ရေးဆွဲခြင်း http://pc.cd/Jo9ctalK
၂၂။ဝေဖြိုးအောင် Peachtree Accounting (Computer Accounting Software) http://pc.cd/vVPctalK
၂၃။အာကာဖြိုး Mobile မျိုးစုံ Root လုပ်နည်း http://pc.cd/PkPctalK
၂၅။ဝင်းဟိန်း Fruity Loop 10 နဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် http://pc.cd/0r9ctalK
( 8 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၃၇ http://pc.cd/mVPctalK
( 13.5 MB ) http://pc.cd/9XPctalK
၃၀။ရဲမင်းအောင် Firmware Flashing Guide
မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် ဖမ်းဝဲ ရေးနည်း http://pc.cd/oXPctalK
၃၂။Android User Guide (7MB )
၃၃။ဦးအောင်လင်း Windows7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ http://pc.cd/30PctalK
၃၄။စုကြည်ထွေး Skype အသုံးပြု နည်း http://pc.cd/8FPctalK
၃၅။Facebook အသုံးပြု နည်း http://pc.cd/e5PctalK
၃၆။မင်းသန့်အောင် Facebook လုံခြုံရေး http://pc.cd/mFPctalK
C++ Complete Vol :2http://pc.cd/v0PctalK ၄၀။ဦးအောင်မြင့် (M.E.,Australia)
C++ Complete Vol :3http://pc.cd/a0PctalK
Office Word 2010 http://pc.cd/jJPctalK
၄၅။အောင်ဇော်လတ် Learning Autocad 2010 အပိုင်း (၁)
အထက်ပါစာအုပ်များတွဲလေ့လာရန် Work File ကွန်ပြူတာနှင့်ဖွင့်ရန် ( ဖုန်းနဲ့မရပါ )
( 12 .5MB ) ‪#‎စာမျက်နှာ‬ - ၁၆၄ http://pc.cd/sLDctalK
၄၇။ဝင်းဟိန်း အိမ်တွင်းအသံဖမ်းစတီရီယိုတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း ( 8 .9MB ) စာမျက်နှာ - ၁၃၂ http://pc.cd/gbDctalK
၄၉။The Civil Engineering Handbook .PDF ( 43 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၈၁၄ http://pc.cd/tJPctalK
၅၁။Transportation Engineering Handbook http://pc.cd/K0PctalK
၅၃။Gmail အသုံးပြုနည်း http://pc.cd/e9gctalK
၅၄။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) Smart Card နည်းပညာခရီးသည် ( 13 MB )
၅၅။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) Mobile ကွန်ယက် နည်းပညာ http://pc.cd/angctalK
၅၆။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) Honest Hacking ရိုးသားစွာထိုးထွင်းလေ့လာခြင်း
၅၇။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) လက်တော့ပ် ပြုပြင်ခြင်း http://pc.cd/PngctalK
၅၈။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) မြန်မာလက်ရာနှင့်ဖန်တီးအနုပညာ ကွန်ပြူတာဖြင့် ဖန်တီးမှုအနုပညာ http://pc.cd/sngctalK
၅၉။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ကလေးများအတွက် ပရိုဂရမ်အလွယ်ရေးသားနည်း http://pc.cd/negctalK
၆၀။သန်းထိုက် Android ပေါ်မှ လက်တွေ့သုံးနည်းပညာ http://pc.cd/qogctalK
၆၁။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) အင်တာနက်လိပ်စာများ http://pc.cd/2egctalK
၆၂။သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) i Drive များအတွက် လက်တွေ့သုံးနည်းပညာများ ( 13 .MB ) http://pc.cd/qegctalK
၆၃။ကို P - iPhone 4G 3GS 3G အသုံးပြုမှု လက်စွဲလမ်းညွှန်
၆၅။Laptop တစ်လုံးကို ကြာရှည်ခံပြီး လုံခြုံ စိတ်ချစေရန် နည်းလမ်းများ http://pc.cd/OlArtalK
၆၆။Laptop ပျက်နေပြီဆို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ http://pc.cd/5sgctalK
၆၇။Laptop တစ်လုံး ပြု ပြင်မည်ဆိုရင် သိထားရမည့် အချက်များ http://pc.cd/vWgctalK
၆၈။သူရအောင် Using Internet & E-mail Update
၆၉။သူရအောင် Wibsite လမ်းညွှန် နှင့် Facebook အသုံးပြု နည်း http://pc.cd/jwArtalK
၇၀။မျိုးသူရ ကွန်ပြူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ တည်ဆောက် အသုံးပြု ခြင်းနှင့် အခြေခံသဘောတရားများ http://pc.cd/Q2gctalK
၇၁။မျိုးသူရ ကွန်ပြူ တာ တပ်ဆင် ပြု ပြင် ထိန်းသိမ်း
နည်း အခြေခံသဘောတရားများ http://pc.cd/82gctalK
ကွန်ပြူ တာသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ http://pc.cd/wWgctalK
၇၄။ဇော်လင်း Using Facebook
၇၅။ဦးဇော်လင်း ကွန်ပြူတာအထက်တန်း အတွဲ (၁) http://pc.cd/tOgctalK
၇၆။ဦးဇော်လင်း ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးမှကွန်ပြူတာပြင်ပါ PC Mechanic
၇၇။ဇော်လင်း ( YOUTH ) A+ကွန်ပြူတာအကြောင်းအသေးစိတ်သိကောင်း စရာ http://pc.cd/OsgctalK
၇၈။ဇော်လင်း ( YOUTH ) Email နှင့် Facebook အသုံးပြုနည်း
၇၉။ဖိုးနိုင်ဝင်း လွယ်ကူလေ့လာ ကွန်ပြူ တာ အဆင့်တိုးမြှင့် နှင့် ပြု ပြင်ခြင်းပညာ http://pc.cd/wsgctalK
၈၀။ကိုဒီမွန်း ဖုန်းဖြင့် pdf ကို စနစ်တကျရေးနည်း
၈၃။ဒီဖိုင်းပြု လုပ်ရာတွင်လိုအပ်သော အလေ့အကျင့်ကောင်း
၈၄။ဦးသန်းဝင်း Learning Web Designလက်တွေ့သင်ခန်းစာများ
၈၆။concise Hydraulics http://pc.cd/1DgctalK
၇၈။concise Hydrology http://pc.cd/1egctalK
၈၈။Introduction to HVAC Control Systems http://pc.cd/Q9gctalK
၈၉။Integrated Building Management System(IBMS) http://pc.cd/UDgctalK
၉၀။Introduction to Building Automation System(BAS) http://pc.cd/3DgctalK
၉၁။Introduction to Geotechnical Processes http://pc.cd/qDgctalK
၉၂။Making IT http://pc.cd/LegctalK
၉၆။Microstation Training Guide http://pc.cd/81gctalK
၉၇။Microsoft Computer Dictionary - Fifth Edition http://pc.cd/OegctalK
၁၀၀။Pile Design And Construction Practice http://pc.cd/EUgctalK
၁၀၁။Power Point 2010 http://pc.cd/dqPctalK
၁၀၂။Rock Mechanics and Foundation Engineering http://pc.cd/o6gctalK
SHALLOW Foundations http://pc.cd/06gctalK
၁၀၅။Stack Effect တွက်နည်း http://pc.cd/kOgctalK
၁၀၆။Soil-Structure Interaction http://pc.cd/YOgctalK
၁၀၇။Soil Liquefaction http://pc.cd/v6gctalK
၁၀၈။ဝင်းဒိုး ၇ တင်နည်း http://pc.cd/eVPctalK
၁၀၉။ဝင်းဒိုး ၈ တင်နည်း http://pc.cd/5XPctalK
၁၁၀။ဝင်းဒိုး ၁၀ တင်နည်း http://pc.cd/QkPctalK
၁၁၄။Applied 3D modeling in AutoCAD – (Robert Tin Aye) http://pc.cd/wqPctalK
၁၂၃။မိုးမြင့်ရှိန် PHP ebook (Myanmar version)
၁၂၇။Geotechnical Earthquake engineering http://pc.cd/QlPctalK
( 16 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၆၇ http://pc.cd/JvPctalK
၁၉၀။Basic Ship Theory Volume 1 (4. 50 MB ) စာမျက်နှာ - ၄၀၀
၁၉၄။မိုးမြင့်ရှိန် Joomla website အတွက်အခြေခံပြင်ဆင်မှုများ နှင့် Google apps နှင့် Domain Name ချိတ်ဆက်ခြင်း
၁၉၆။Networking ဘာသာရပ်ကြီးကို ရှင်းလင်းနိုင်ရန် မရည်ရွယ်ပါ။ မိမိတို့ ရုံး၊ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ Computer အနည်းငယ်ကို ချိတ်ဆက်၍ File နှင့်
Printer များကို ဝေမျှ သုံးစွဲနိုင်ပါရန် Networking အတွေ့အကြုံ မရှိသူများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါစေရန် ရေးသားထားပါတယ်။ စာအုပ်အမည် - Notes on Home Networking စာရေးသူ - Book-Shelf Admin Team ( 1.6 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၅ http://pc.cd/9GTctalK
၁၉၈။Adobe PageMaker 7.0 မှာ Unicode Font သုံးလို့ မရပါဘူး။PageMaker လို DTP နဲ့ Unicode သုံးလိုသူများအတွက် စာအုပ်အမည် - Adobe InDesign CS3 တပ်မတော်သုံးကွန်ပြူတာလက်စွဲ စာရေးသူ - ကကကွန် စာမျက်နှာ - ၁၇၂ အရွယ်အစား - 21 MB http://pc.cd/sGTctalK
၁၉၉။Android Programming ကို စတင်လေ့လာလိုသူများအတွက် - Java, C, C++, C# စတဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် ဤစာအုပ်တစ်အုပ်တည်း ဖတ်မိရုံနဲ့ Android Programming အကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။ Title: Android Application Development For Dummies Author: Michael Burton, Donn Felker ( 42.3 MB ) စာမျက်နှာ ၄၀၈ http://pc.cd/HiTctalK
၂၀၀။A complete preparation guide for the entry-level networking CCNA certification. Title: CCNA Certification All-In-One For Dummies Author: Silviu Angelescu ( 68.6 MB ) စာမျက်နှာ ၁၀၀၈
၂၀၁။Computer Networking ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Title - Cisco Router Configuration Handbook Author - David Hucaby ( 7.62 MB ) စာမျက်နှာ ၆၄၁ http://pc.cd/ivTctalK
၂၀၂။Computer Hardware နှင့်ပတ်သက်လို့ လေ့လာနိုင်ပါရန် Title - A+ Certification Bible Pages - 1185 Size - 36.1 MB http://pc.cd/LGTctalK
၂၀၃။ကွန်ပျူတာ စာရင်းကိုင်ပညာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါရန် - Title - Peachtree Accounting Author - ဝေဖြိုးအောင် ( 5.07 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၇၀
၂၀၄။ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်မှု အတွက် Keith Underdahl - Adobe Premiere Elements For Dummies ( 14.5 MB ) စာမျက်နှာ ၃၈၅ http://pc.cd/VvTctalK
၂၀၅။CSS for windows 8 App development (7.5MB ) စာမျက်နှာ - ၃၀၁
၂၀၆။You Can Program in C++ (4. 50 MB ) စာမျက်နှာ - ၃၈၇ http://pc.cd/daTctalK
၂၀၇။C++ Complete Vol3ဆရာ အောင်မြင့် ရေးသားထားသော C++ ရေးသားနည်း စာအုပ်လေးပါ.. ဒီကောင်လေးကတော့ အမှတ် ၃ ပဲဖြစ်ပါတယ်။။။ C++ Programming ဘာသာရပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့လာနိူင်ပြီး ထူးချွန်သော programmer တွေအဖြစ်သို့ လျှောက်လှမ်းနှိုင်ကြပါစေလို့ သယ်ရင်းတို့ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်စင် မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ http://pc.cd/p3TctalK
၂၀၈။Easy iDevice GuideBook (သူငယ်တန်း Apple ဖတ်စာ) ကျွန်တော်တို့ အကိုကြီး ဆရာ ကိုနေဇာအောင် (ကိုမိုးသိကြား) ရေးသားထားသော I Device အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုနည်းပညာ ရှာမှီးသူတွေအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနဲ့ အကူအညီများစွာပေးခဲ့သော ဆရာ မိုးသိကြား ကိုလဲ ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျ... Fully Respect ပါ ဆရာရေ ( 11 . 1 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၉ http://pc.cd/XiTctalK
၂၀၉။WEB DESIGNER'S GUIDE TO ADOBE PHOTOSHOP padonma ဖိုရမ်မှ Chris Tull လေးပြုစုရေးသားပေးထားသော ဖိုတိုရှော့ ဖြင့် ၀က်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲနည်း အခြေခံစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ရေးသားပေးသူ chris tull လေးကိုရော နည်းပညာတွေ အဆင်အမြဲ ဖြန့် ဝေပေးနေတဲ့ padonma ဖိုရမ်ကိုရော ဒီနေရာလေးကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပါရစေခင်ဗျ.......... ( 12 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၂
၂၁၀။အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် အသိပေးချက် ၈ ချက် အင်တာနက် အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက် ၈ချက်ပါ.... မူရင်းရေးသားသူကိုလဲ ကျေးဇူးအထူုးတင်ရှီပါကြောင်း ဒီနေရာလေးကနေ ပြောပါရစေခင်ဗျ... ( 658 KB ) စာမျက်နှာ - ၁၃
၂၁၁။Learning Web Design, Web Design လက်တွေ့ သင်ခန်းစာများ ဆရာ ဦးသောင်းဝင်း (ပန်းချယ်ရီ) ရေးသားထားသော web design အသုံးပြုနည်းနှင့် သင်ခန်းစာများ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ http://pc.cd/JrTctalK
၂၁၂။Basic PHP Tutorial ဆရာ ကိုတင်ထွန်းလွင် ရေးသားထားသော Php အသုံးပြုနည်း အခြေခံစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ( 909 KB ) စာမျက်နှာ - ၈၃ http://pc.cd/IoTctalK
၂၁၃။ကိုကျော် PHP လှေကားထစ်များ
၂၁၄။Window 10 အသုံးပြုနည်း http://pc.cd/QjtctalK
( ၃၁ ) အုပ် ၁။ဝင်းထက်ဝင်း ရာစုသစ် အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ် http://pc.cd/919ctalK
၂။မင်းသိန်း ခေတ်မှီ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ အပိုင်း (၁)
၄။မင်းသိန်း ခေတ်မှီ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ အပိုင်း (၂)
၅။ဦးအုန်းမြို င် AC မှ DC သို့ DC မှ AC သို့ http://pc.cd/Af9ctalK
၆။ဦးကိုကိုလေး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ http://pc.cd/vf9ctalK
၇။ဦးကိုကိုကြီး လျှပ်စစ်မော်တာပြု ပြင်နည်း နှင့် ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်နည်း http://pc.cd/as9ctalK
၈။စက်မှုအီလက်ထရောနစ် - ဆရာဦးတင့်ဇော် http://pc.cd/4f9ctalK
၉။ဦးကောင်းထက်ညွန့် Air Conditioning and Mechanical
Ventilation (Volume-1) မြန်မာလို http://pc.cd/lD9ctalK
၁၀။အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ - ဦးကျော်နိုင် http://pc.cd/K19ctalK
၁၂။ROBOTICS FOR BEGINNER http://pc.cd/a29ctalK
(6.5MB ) စာမျက်နှာ - ၇၆ http://pc.cd/Mj9ctalK
( 21 MB ) စာမျက်နှာ - ၂၁၆ http://pc.cd/Fj9ctalK
၁၇။Electrical Knowledge မြန်မာလို http://pc.cd/9j9ctalK
၁၈။Motor PF http://pc.cd/XS9ctalK
၁၉။Motor Losses မြန်မာလို http://pc.cd/uj9ctalK
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၇။အခြေခံစက်မှုပုံဆွဲအတတ်ပညာ http://pc.cd/TD9ctalK
၃၁။မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ EFI အင်ဂျင်နှင့် ကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်စနစ် http://pc.cd/C19ctalK
ဗွီဒီယို နှင့် ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် ၅၁ အုပ် ၁။Adobe Photo Shop CS
(5.5MB ) စာမျက်နှာ - ၁၆၂ http://pc.cd/vE9ctalK
၂။အောင်မြင့် Adobe Photo Shop CS2
၃။ဦးအောင်နိုင်မော် Adobe Photo Shop CS3
ဖိုတိုရှော့ကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပါ http://pc.cd/yO9ctalK
၄။မျိုးဆက် Adobe Photo Shop CS4
၅။ရဲရှင်း Adobe Photo Shop CS5
၇။ADOBE PHOTOSHOP CS6 အင်္ဂလိပ်စာအုပ် Help and tutorials
( 11 .16 MB ) စာမျက်နှာ - ၇၅၇ http://pc.cd/jo9ctalK
၈။ကွန်ပြူတာလက်စွဲ Adobe Photo Shop 7.0 ( 28 .55 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၉၃ http://pc.cd/5O9ctalK
၉။Adobe Photo Shop 7.0 ( 13 MB )
၁၀။အောင်နိုင်မော် ADOBE PHOTOSHOP DESIGN TUTORIALS
၁၁။ခိုင်မောင် Graphic Designer များအတွက် ဖိုတိုရှော့ ( 8 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၂၇ http://pc.cd/Eo9ctalK
ဂရပ်ဖစ် ( 15 MB )
ရုပ်သံတည်းဖြတ် ( 12 MB )
၁၈။စိုးဝင်း အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာ http://www.mediafire.com/download/3e6ca5kef1ul6cd
၂၃။ဦးစိုးလှိုင် အမှောင်ကျကျ အရိပ် မဲမဲ ပုံရိပ် ရိုက်ကူးခြင်း။
၂၉။ဦးစိုးလှိုင် DSLR Metering အကြောင်း သိကောင်းဖွယ်ရာ
၃၁။နန္ဒထွန်း Macro Photography
၃၄။ဦးစိုးလှိုင် Panning Mode(ကင်မရာဘေးတိုက်ရွေ့လျားခြင်း)
၃၅။မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် PHOTOSHOP NOTES(1) ဖိုတိုရှော့မှတ်စု(၁)
၃၆။မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် PHOTOSHOP NOTES(1) ဖိုတိုရှော့မှတ်စု(၂)
Cs/CS2/CS3/CS4/CS5 များမှာသုံးတဲ့ TOOL များအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါသည် ( 8 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၆၇ http://pc.cd/jU9ctalK
၃၉။ဦးစိုးလှိုင် Portrait ရိုက်ကူးရေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ
၄၀။ဦးစိုးလှိုင် Rule of Thirds ကိုချိုးဖေါက်ခြင်း
၄၁။ဦးစိုးလှိုင် Single Point Focusing နှင့်ပတ်သက်၍သိရှိသင့်သည့် အချက်များ။
၄၂။ဦးစိုးလှိုင် Understanding Histogram, Raw & Jpeg...!
၄၄။ဦးစိုးလှိုင် ဓါတ်ပုံ မှာ Noise ဘာကြောင့် ပေါ်လာရသနည်း
၄၆။ဦးစိုးလှိုင် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုဖွဲ့စည်းရာတွင်အလွန်အရေးပါသည့် Leading Lines http://pc.cd/ua9ctalK
၅၀။ဦးစိုးနိုင် အကောင်းဆုံး Focus ဖြစ်လာစေဖို့ ဆောင်ရွက်ရန် http://pc.cd/uG9ctalK
၅၁။ ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်မှု အတွက် Keith Underdahl - Adobe Premiere Elements For Dummies ( 14.5 MB ) စာမျက်နှာ ၃၈၅ http://pc.cd/VvTctalK
( 39 . 64 MB ) စာမျက်နှာ - ၁၁၇၈ http://pc.cd/xpCctalK
LMA)Cisco Certified Network Associate Version2(200-120) http://pc.cd/BpCctalK
(6. 19 MB ) စာမျက်နှာ - ၆၂၄ http://pc.cd/RFCctalK
(6. 44 MB ) စာမျက်နှာ - ၅၀၈ http://pc.cd/S5CctalK
၁၄၃။revit and 3Ds max .RAR (၅)အုပ် http://pc.cd/ClPctalK